Mifanena amin’ny andian’omby arivo mahery taloha raha mandeha manomboka eo Tsiroanomandidy, Ambatomainty, hatrany Maintirano, any amin’ny faritra Bongolova sy Melaky. Amin’izao fotoana, tsy misy intsony, tapitra ny omby. Koa raha lazaina fa mihena ny asan-dahalo, ny tena marina ny omby angalarina no efa tsy misy firy intsony. Harena voalohany ny omby any amin’ny faritra Melaky, saingy tsy izany intsony ny harena sy ny kolontsaina ankehitriny. Izay kely sisa tavela, mbola misy tafakatra amin’ny fomba tsy mazava ihany aty an-dRenivohitra.
Mihatsara toerana, fantatry ny olona ankehitriny ny Tranoben’ny tantsaha mpamokatra, araka ny fanazavana nentin’ny filohany, Razafimbololona Lydia Angeline. Araka izany, misokatra ho an’ny rehetra, indrindra ny tontolo ambanivohitra ny Tranoben’ny tantsaha mpamokatra, vonona mifanakalo hevitra amin’ireo tantsaha hamahana ny olana. Anisan’ny voaresaka sy olana voalohany matetika momba ny tany volen’ireo tantsaha. Mifanampy amin’izany ny Tranoben’ny tantsaha amin’ny famahana olana, satria tsy vitsy ireo mpisoloky mpangalatra tany amin’izao fotoana.
Mahazo vahana fotoana maharitra ny fandripahana ala any amin’ny faritra Sofia. Misy andian’olona mandripaka ala ary manondrana izany any amin’ny faritra hafa. Manoloana izany, mandray fepetra ny mpiandraikitra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, ny zandarimaria sy ny ao amin’ny distrikan’i Port-Bergé. Nifampidinika tamin’ny vahoaka izy ireo nampahalala ny loza efa mihatra ankehitriny aterak’izany sy ny tsara ho fiarovana ny ala ho tombontsoan’ny rehetra, indrindra amin’izao fiovan’ny toetr’andro izao.
Faritana ny politika fomba fitantanana ny ranomasina eto amintsika, nanaovana drafi-panajariana ny ranomasina. Miara-miasa amin’izany ny minisitera misahana ny fanajariana ny tany sy ny fiompiana, izay mitrandraka ny harena an-dranomasina. Mila politika manokana ny fitantanana ny ranomasina, ny fepetra tokony horaisina aminy. Tokony ho voafaritra ao anatin’ny PEM (Politique émergence de Madagascar) ny ataon’ny tsirairay ho fampiharana izany. Nanohana ny Usaid, hisian’ny mangaraharaga amin’ny maha Nosy an’i Madagasikara.